परियोजना व्यवस्थापन भनेको के हो? - कम्पनी समाचार - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
परियोजना व्यवस्थापन भनेको के हो?
समय: 2018-05-05 हिट्स: 3
परियोजना ब्यबश्थापनको विवरण प्रदान गर्न, शब्दहरूको परिभाषाबाट सुरू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ: "प्रोजेक्ट" र "व्यवस्थापन"। त्यसो भए कुन परियोजना छ? यो एक उद्यम हो, कि त व्यक्तिगत वा सहयोगी, विस्तृत योजना बनाई र निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लिइएको। अवश्य पनि, यसले केहि सन्दर्भमा गर्न सक्दछ, वर्ग असाइनमेन्टबाट सुरू गरेर, ब्यापार कर्पोरेसनहरूमा भएका विस्तृत परियोजनाहरूमा। प्रोजेक्ट अस्थायी प्रक्रिया हो जुन केहि दिन लिन सक्दछ वा यसले दुई वा धेरै वर्षसम्म लिन सक्दछ।
र व्यवस्थापन बारे के? यो जस्तो लाग्छ त्यति सरल छ - चीजहरू वा मानिसको चार्ज हुनको अभ्यास। त्यसोभए परियोजना व्यवस्थापनको साथ के छ? परियोजना व्यवस्थापन हामीलाई थाहा छ यो २० औं शताब्दीमा अस्तित्वमा आएको थियो र १ 20 s० को दशकमा अर्थव्यवस्थाको तृतीयक क्षेत्रमा र सामान्यतया बुझिने व्यवसायको क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको एक अलग अनुशासन भयो। आज यसले प्राय: बिभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूलाई ल्याउँछ - शहर वा देशहरू, तिनीहरू प्रत्येकको विशेषज्ञता र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको फरक क्षेत्र हुन्छ। यस कारणका लागि, यो प्राय: टाढाबाट गरिन्छ।
परियोजना व्यवस्थापनका पाँच चरणहरू छन् (पीएमआईको एक गाईड प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट बडी अफ नलेजको अनुसार):
२ योजना र डिजाईन
Monitoring. अनुगमन र नियन्त्रण
C. बन्द गर्दै
अवश्य पनि प्रत्येक परियोजना ब्यबश्थापनमा तपाईले आफ्नो कामलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नु पर्छ। तपाईं यो विशेष सफ्टवेयरको साथ परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर नामको सफ्टवेयरको साथ गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, ट्रेलो, इभर्नोट, आसन।
अघिल्लो: R&D र डिजाईन र ईन्जिनियरि ?को क्षेत्रहरू बीच के भिन्नता छ?
अर्को: के आईपीएल कपाल हटाउन राम्रो काम गर्दछ? तपाईलाई इच्छित परिणाम दिनुहोस्।